Doorasho ay diidan tahay dowladda dhexe ee Itoobiya oo gobolka Tigray ka bilaabatay – Calanka.com
Doorasho ay diidan tahay dowladda dhexe ee Itoobiya oo gobolka Tigray ka bilaabatay
in Dibedda — by admin —	September 9, 2020
Dadweynaha gobolka Tigray ee dalka Itoobiya ayaa maanta u dareeray goobaha cod bixinta, iyagoo ka qayb qaadanaya doorasho ay isku maandhaafsan yihiin gobolkaas iyo dawlada dhexe ee dalka Itoobiya.
Guddiga doorashada ee dalkaasi ayaa doorashada dib u dhigey xanuunka Covid19 awgeed.
Shacabka Tigrayga ayaa soo dooranaya aqalka baarlamaanka heer gobol oo ka kooban 190 kursi.
Golaha Federeeshiinka ee dalkaasi Itoobiya oo dhawaan shir degdeg ah ka yeeshay amuurtan wuxuu sheegayin dhaq-dhaqaaqyada ka socda ismaamulka deegaanka Tigreega uu ku doonayo doorasha ka duwan dalka intiisa kale uu deegaan ahaan qabsado ay tahay mid gabi ahaanba ka horimaneyso dastuurka dalka Itoobiya u yaalla iyo shuruucda doorashda.
“Arrimaha sharcidarrada ee ka socda deegaanka Tigreega dartii shacabka deegaankaasi iney dhibaato soo gaarto looma baahna, wixi dhib ee jirana goluhu wuxuu aaminsan yahay iney wadahadal iyo isafgarasho lagu dhammeeyo, goluhuhna wuxuu dhiirragelinayaa dadaal kasta oo ismariwaaga taagan xal looga raadinayo” ayuu yiri.
Golaha Federeeshiinka wuxuu maamulka deegaanka Tigreega iyo xisbiga talada deegaankaasi haya ee TPLF uu ugu baaqay iney joojiyaan xadgudubyada xuquuqda aadanaha iyo gabood fallada ay u geysanayaan shacabka deegaankaasi ee la xidhiidha doorashada deegaankaasi uu qorsheynayo inuu si gooni ah uu u qabsado.
SAWIRRO: Israel, Baxrayn iyo Imaaraadka oo heshiiskii cilaaqaadka ee ay wada gaareen kala saxiixday
Afarta boolis ee ku eedeysan dilka George Floyd oo midba midka kale ku eedeynaya dhimashadiisa
LUBNAAN: Dekedda magaalada Bayruut oo uu dab xooggan ka kacay bil kadib qaraxyadii bur-buriyay
Mareykanka oo maalinta berri ah ka mamnuucaya dalkiisa baraha bulshada TikTok iyo WeChat
Sudan has sent a high level delegation to the United Arab Emirates to negotiate with American officials as the country[Read More…]
Louisville to pay $12m to Breonna Taylor’s mother, reform police
Ra`yi / Opinion
Ra`iisal wasaaraha cusub oo kulan “isbarasho” ah la qaatay guddoonka sare ee baarlammaanka iyo xubno kale
Mareykanka oo u hanjabay waddamada aan sii wadin cunaqabateynta hubka ee Iran ee horay QM uga diiday
Itoobiya oo siyaasi caan ah iyo xubno kale ku oogtay dambiyo agagixisonimo
VIDEO: Daawo sida booliska caddaanka ah u jir-dilayo ninka madowga ah
VIDEO: Malaayiin daawatay muuqaalka “Trump” oo pizza ka dalbanaya maqaayad
VIDEO: Boolis la weeraray, si xunna loo dhaawacay xilli ay nasiino ku jireen dalka Mareykanka
VIDEO: Boolis agab ka xadayo guri nin waayeel ahi ku dhex dhintay
VIDEO: Askari biladda ugu sarreysa ciidamada ku helay maxaabiis uu kasoo bad-baadiyay ISIS
VIDEO: Daawo waxa qabsada waayeel aan ka war hayn waxa agtiisa ka dhacaya
VIDEO: Makarafoon wareeriyay la-taliyaha madaxweyne Trump xilli uu ku sugnaa Abu Dhabi
VIDEO: Daawo muuqaalka ninkii weerarka mindida ka geystay magaalada Birmingham
VIDEO: Ninkii madowga ahaa ee ay boolisku 7 xabadood ku dhufteen oo sariirta isbitaalka farriin kasoo diray
VIDEO: Ciyaaryahan ka yaabiyay umaddi daawaneysay, ralli-gelina bixiyay
Dalka Indonesia oo ciqaab cusub gelinaya dadka diida xirashada maaskada looga hortago Corona